Information in Somali - Asylum Seekers UK - Refugee Council
Bogga af Soomaaliga waxa ku jira dhamaan warka Golaha Qaxootiga (Refugee Council) ee lagu heli karo af Soomaali. Waraaqahan xaqiiqooyinka ah qoraalada yaryar ee warka ah waxa loogu talogalay qaxootiga iyo magangalyo-doonka ku hadla af Soomaali ee doonaya inay wax ka sii ogaadaan habka magangalyada.
Tag Adeegyada Golaha Qaxootiga si aad wax uga ogaatid Goobtayada Adeegga (One Stop Services) halkaasoo aad ka heli kartid talo iyo gargaar dheeraad ah. Waxa kale oo aanu bixin karnaa turjubaano si loo garto baahidaada.
Rugta Internetka ee Golaha Qaxootiga waxa ku jira war iyo qoraalo dheeraad ah laakiin waxay ku qoran yihiin kaliya af Ingiriisi.
Codsashada taageero magangalyo-doonnimo
UMa tahay qof sabool ah oo dhamestay habkiintitled
Xumeynta Guriga – ma u baahan tahay gargaar?
Codsiga taageero lacag (kaash)kaliya: la degista qof qoyska ah ama saa
Lacagaha hooyada la siiyo ee waalidka weydiistay
Ma tahay dhibane dhibis sinji?
Dugsiyada caruurta – warqad war iyo xaqiiqooyin ah oo loogu talogalay
Sidee Shabakadda La-saaxiibka Caafimaadku (Health Befriending Network) kuu caawin kartaa
Xaashidan waxa sharxaysaa sida aad uga faa’iidi karto haddii aad noqoto tabaruce la-saaxiibka mashruuca Shabakadda La-saaxiibka Caafimaadka (Health Befriending Network project) iyo/ama gargaarka aad ka heli karto haddii aad u baahato in aad hesho adeegya
Ma u baahan tahay caawimo si aad galaangal ugu hesho daryeelka caafimaad?
Warqaddani waxay sharxaysaa waxa ay yihiin adeegyada Adeegga Caafimaadka Qaranka(National Health Service) ( NHS ) ay bixiyaan iyo adeegyada loo heli karo magangalyo doonka oo bilaa lacag ah marxalado kala duwan ee absocodka.